Royal & Country Golf Club
၃ညအိပ် ၄ရက် ( ဒါနန်း-ဘန်နဟင်လ်း-ဟွေအန်း ) ခရီးစဉ်
(၀၁ ဇွန်လ ၂၀၁၉ မှ ၃၁ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၉ Pre Wedding Shooting ခရီးစဉ်)
Day1: YANGON – HO CHI MIN(SAI GON) – DA NANG
နေ့လည် ၁၂း၁၀ နာရီအချိန်တွင် Vietnam Airlines လေယာဉ် VN.942 ဖြင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟိုချီမင်းမြို့ (Sai Gon) Tan Son Nhat လေဆိပ်သို့ ထွက်ခွာကြပါမည်။ နေ့လည်စာကို လေယာဉ်ပေါ်တွင် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ ဗီယက်နမ်စံတော်ချိန် ညနေ့ ၀၃း၁၀ နာရီအချိန်တွင် ဟိုချီမင်းမြို့ ရှိ (Sai Gon) လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိကာ လေဆိပ်တွင် Transit ဖြတ်သန်းကြပြီးနောက် Vietnam Airlines လေယာဉ် VN.138 ဖြင့် ဗီယက်နမ်အလယ်ပိုင်း ဒါနန်းမြို လေးသို့ ညနေ ၀၆:၀၀ နာရီအချိန် တွင် ဆက်လက်ထွက်ခွာကြပါမည်။ ည ၀၇း၂၀ နာရီအချိန်တွင် ဒါနန်းလေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိကာ လေဆိပ်သို့ ဧည့်လမ်းညွှန်မှ လာရောက် ကြိုဆိုကာ ကြယ်လေးပွင့် အဆင့်ရှိ Serene Hotel4Star (or) Similar4Star Hotel သို့ သွားရောက် Check in ၀င်၍ တစ်ညတာ အိပ်စက်အနားယူကြပါမည်။
Day2: DA NANG - BA NA HILL – Shooting with Dinh Thai Studio – MY KHE BEACH - DA NANG
ဟိုတယ်တွင် မနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ရှေးဟောင်းပြင်သစ်ပုံစံ အဆောက်အဦးများဖြင့် ဥရောပမြို့လေးသဖွယ် တည်ရှိနေသော Ba Na Hill တောင်ပေါ်သို့ အာရှ၏ အရှည်ဆုံးသော Cable Car စီး၍ တက်ရောက်ကြပါမည်။ Ba Na Hill တောင်ပေါ်သို့ ရောက်လျှင် ယခုလက်ရှိ ရွှေရောင် လက်တံတားဟု ခေတ်စားနေသည့် Golden Bridge သို့ သွားရောက်ပြီး Pre Wedding အလှ ဓါတ်ပုံများကို ဗီယက်နမ် ရှိ နာမည်ကျော် Studio ဖြစ်သည့် Dinh Thai ဖြင့် ရိုက်ကူးကြပါမည်။ ထို့နောက် French Villas ၊ Suspension Bridge ၊ Golden Bridge ၊ Nui Chua နှင့် The Mountain Peak ၊ Vong Nguyet Villa နှင့် Sakyamuni Buddha’s monument သို့ သွားရောက် လည်ပတ်ကြပါမည်။ ထို့နောက် Ba Na တွင် မိမိ စိတ်ကြိုက် ကစားကြပြီး အမှတ်တရဓါတ်ပုံများ ရိုက်ကူးကြပါမည်။ ထို့နောက် နေ့လည်စာကို Local Restaurant တွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက် တောင်ပေါ်မှ ပြန်ဆင်းလာကာ Da Nang သို့ ပြန်လည် ထွက်ခွာပြီး My Khe Beach နှင့် မင်္ဂလာစုံတွဲ အများစု Pre Wedding သွားရောက် ရိုက်ကူးကြသည့် Da Nang မြို့တွင်း ရှိ Pink Church (Da Nang Cathedral) သို့ သွားရောက်ကြပြီး အမှတ်တရ Pre Wedding ဓါတ်ပုံများ ရိုက်ကူးကြပါမည်။ ထို့နောက် Han river Swing တံတား နှင့် Dragon တံတား တို့ သို့လည်း သွားရောက်ပြီး Pre Wedding ဓါတ်ပုံများ ရိုက်ကူးကြပါမည်။ ထို့နောက် ညစာကို Local Restaurant သို့ သွားရောက် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ ထို့နောက် ဟိုတယ်သို့ ပြန်၍ အိပ်စက် အနားယူကြပါမည်။
Day3: DA NANG – Shooting with Dinh Thai Studio - HOI AN OLD TOWN
နံနက်စာကို ဟိုတယ်တွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက် Son Tra Peninsula နှင့် Monkey Mountain ဟု လူသိများသော တောင်ပေါ်သို့ သွားရောက်ကာ Linh Ung Buddha သို့ သွားရောက် ဖူးမျှော်ကြပါမည်။ ထို့နောက် နေ့လည်စာကို Local Restaurant တွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက် ရှေးဟောင်းအငွေ့အသက်များ လွှမ်းခြုံရာ ဟွေအန်းမြို့ သို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာကြပါမည်။ ပြင်သစ် ရိုးရာစတိုင် ၊ ဂျပန်ရိုးရာစတိုင် နှင့် ဗီယက်နမ်ရိုးရာ စတိုင် စသည့်ဖြင့် ယဉ်ကျေးမူ သုံးမျိုးစလုံးကို လွှမ်းမိုးထား သည့် မြို့လေး ဖြစ်သည့် ဟွေအန်းမြို့လေး သို့ ရောက်လျှင် ရှေးဟောင်းအငွေ့အသက်များ လွှမ်းခြုံထားသည့် ဟွေအန်းမြို့ဟောင်းလေး ဖြစ်သည့် Old Town ထဲတွင် အမှတ်တရ Pre Wedding ဓါတ်ပုံများ ရိုက်ကူးကြပါမည်။ ထို့နောက် Tua Bon River သို့ သွားရောက်ပြီး Boat ပေါ်တွင် အမှတ်တရ Pre Wedding ဓါတ်ပုံများ ရိုက်ကူးကြပါမည်။ ထို့နောက် ညစာကို Local Restaurant သို့ သွားရောက် သုံးဆောင် ပြီးနောက် ကြယ်လေးပွင့် အဆင့်ရှိ River Green Hotel4Star (or) Similar4Star Hotel သို့ သွားရောက် Check in ၀င်၍ တစ်ညတာ အိပ်စက်အနားယူကြပါမည်။
Day4: HOI AN - DA NANG – HA NOI – YANGON
နံနက်စာကို ဟိုတယ်တွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ်မှ Check out လုပ်ကာ နေ့လည်စာ သွားရောက် သုံးဆောင်ရန် ဟိုတယ် မှ မထွက်ခွာခင် အချိန်အထိ ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်း ၊ လည်ပတ်ခြင်း တို့ကို မိမိကိုယ်ပိုင် အစီအစဉ် ဖြင့် မိမိစိတ်ကြိုက် ပြုလုပ်ကြပါမည်။ ထို့နောက် နေ့လည်စာ ကို Local Restaurant သို့ သွားရောက် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ပြန်လည် ထွက်ခွာရန် အတွက် ဟနွိုင်းလေဆိပ်သို့ သွားရောက်ရန် ဒါနန်းလေဆိပ် သို့ ထွက်ခွာကြပါမည်။ ဒါနန်းလေဆိပ်သို့ ရောက်လျှင် Vietnam Airlines လေယာဉ် VN.168 ဖြင့် ဟနွိုင်းမြို့သို့ ထွက်ခွာကြပါမည်။ နေ့လည် ၁၂း၂၀ နာရီအချိန်တွင် ဟနွိုင်းလေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိကာ လေဆိပ်တွင် Transit ဖြတ်သန်းကြပါမည်။ Transit ဖြတ်သန်းပြီးနောက် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာရန် Vietnam Airlines လေယာဉ် အမှတ် VN.957 ဖြင့် ညနေ ၄း၃၅ နာရီအချိန်တွင် ထွက်ခွာကြပါမည်။ ညနေ ၆း၀၀ နာရီအချိန်တွင် ဗီယက်နမ် ခရီးစဉ်သို့ Pre Wedding ဓါတ်ပုံများ ရိုက်ကူးရန် လိုက်ပါသည့် ဧည့်သည်တော်များသည် ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် သို့ စိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်စွာ ပြန်လည်ရောက်ရှိကြပါမည်။
********************** ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပါသည် ********************
၃ ညအိပ် ၄ရက် Pre Wedding ဗီယက်နမ် ခရီးစဉ်
၀၁ ဇွန်လ ၂၀၁၉ မှ ၃၁ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၉ Pre Wedding Shooting ခရီးစဉ်
1. လူကြီးတစ်ဦးဈေးနူန်း USD 927 (နှစ်ယောက်တစ်ခန်းနေလျှင်)
2. တစ်ယောက်ခန်းနေလျှင် USD 999
(၁)ဖေါ်ပြပါခရီးစဉ်ဈေးနူန်းသည် ခရီးစဉ်တွင် ဖေါ်ပြထားသည့်အတိုင်း အကုန်အပြီးအစီး ပါဝင်သောကြောင့် ထပ်မံ၍ ကောက်ခံခြင်းများ လုံးဝ မရှိပါ။
(၂)ခရီးစဉ်သွားဖြစ်ရန်သေချာပါက ဖေါ်ပြပါခရီးစဉ်ဈေးနှုန်း၏ 50% ကို ကြိုတင်ငွေ Deposit အဖြစ်ပေးသွင်းရပါမည်။ ကျန်ငွေ 50% ကို ခရီးမထွက်ခင် ၁၀ ရက် အလိုတွင် ပေးချေရပါမည်။
(၁) ဖေါ်ပြပါ4Star အဆင့်ရှိ ဟိုတယ်များတွင် ၃ ညအိပ်တည်းခိုနိုင်မူ (3 Night Accommodations)
(၂) ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် Air Con Bus ဖြင့် လည်ပတ်မူများ (Fully Transportation)
(၃) အထက်ပါ ခရီးစဉ်တွင် ဖေါ်ပြထားသော ၀င်ကြေးများအားလုံး
(၄) ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် နံနက်စာ ၊ နေ့လည်စာ နှင့် ညနေစာများ
(၅) ဧည့်သည်တစ်ဦးစီအတွက် တစ်နေ့လျှင် ရေသန့်တစ်ဘူး
(၆) ဒေသခံ အင်္ဂလိပ်စကားပြော ဧည့်လမ်းညွှန် (Local Guide)
(၇) Guide နှင် Driver အတွက်ပေးရသော Tip Money
(၈) Boat Charges for Tua Bon River
(၉) အထက်ဖော်ပြပါ ခရီးစဉ်တွင် ပါဝင်သည့် Cable Car for Ba Na Hill
(၁၀) Photographer + Makeup artist + Wedding Dress ၀တ်စုံ ၃ စုံ ပါဝင် ပါသည်။
(၁) လေယာဉ်စီးရာတွင် လေကြောင်းလိုင်းမှ သတ်မှတ်ထားသော အလေးချိန်ထက် ၀န်ပိုသယ်ဆောင်ခများ
(၂) Vietnam Airlines (VN) အသွားအပြန် လေယာဉ်လက်မှတ်
(၃) ခရီးစဉ် အစအဆုံး လိုက်ပါဝန်ဆောင်မူပေးသော Columbus Travels & Tours မှ Tour Leader
(၄) ခရီးစဉ်တွင် မဖေါ်ပြထားသော အပိုလည်ပတ်မူများ နှင့် ၀င်ကြေးများ
(၅) ဟိုတယ်နှင့် စားသောက်ဆိုင်တွင် အပိုသုံးဆောင်သော အအေး၊ သောက်ရေသန့် နှင့် အခြားဖျော်ယကာများ
(၆) ဟိုတယ်တွင် အသုံးပြုသော အ၀တ်လျှော်ခ ၊ ဖုန်းသုံးစွဲခ နှင့် Minibar အသုံးပြုခများ
(၇) ခရီးဆောင်အိတ်များသယ်ယူခြင်းအတွက် လေဆိပ် နှင့် ဟိုတယ်တွင် ပေးဆောင်ရသော Tip Money
(၈) မိမိကိုယ်တိုင်သုံးသော စရိတ်များ (Personal Own Expense)
Established in January 1993 , Columbus Travels & Tours Ltd,a100% private owned Company,
is the first IATA accredited agent in Myanmar.( IATA 05-3-0100-4 )